विश्वका १९५ देशमा देखियो कोरोनाको संक्रमण, १६ हजार बढिको मृत्यु, कुन देशमा कति देखिए कोराना संक्रमित ? (सूचीसहित) | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more विश्वका १९५ देशमा देखियो कोरोनाको संक्रमण, १६ हजार बढिको मृत्यु, कुन देशमा कति देखिए कोराना संक्रमित ? (सूचीसहित)
विश्वका १९५ देशमा देखियो कोरोनाको संक्रमण, १६ हजार बढिको मृत्यु, कुन देशमा कति देखिए कोराना संक्रमित ? (सूचीसहित)
चैत ११ गते, २०७६ - १०:३१
काठमाडौं । विश्वका १९५ देश नै कोरोना भाइरसको चपेटामा परेका छन् । कोरोनाकै कारण विश्वभर हालसम्म १६,५५८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विश्वभर ३ लाख ८१ हजारभन्दा बढि मानिस कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् ।
डिसेम्बर अन्तिम साता चीनको बुहानमा देखिएको कोरोनाले चीनपछि यूरोपेली देश र अमेरिकालाई संकटतर्फ पुर्याएको छ । कोरोनाको कारण युरोपेली देश इटली सबैभन्दा बढि प्रभावित बनेको छ ।
इटलीमा कोरोनाकै कारण ६ हजारभन्दा बढि ज्यान गुमाए
इटलीमा कोरोनाको संक्रमण दर निकै डरलाग्दो खालको छ । गत १५ फ्रेबुअरीमा इटलीमा ३ जना व्यक्तिमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो । कोरोना संक्रमित भेटिएको १५ दिनमा इटलीमा झण्डै हजारभन्दा बढि व्यक्ति संक्रमित भएका थिए । तर १ हजार संक्रमित भेटिएको झण्डै २२ दिनमा इटलीमा ६३ हजार भन्दा भढि व्यक्ति कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् ।
इटलीमा कोरोनाकै कारण हालसम्म ६ हजार बढिले ज्यान गुमाएका छन् । सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार पछिल्लो साता इटलीमा दैनिक औषत ४५०० बढि मानिस संक्रमित भेटिएका छन् भने औषत ५ सयभन्दा बढिले ज्यान गुमाएका छन् ।
इटलीको नागरिक सुरक्षा विभागका प्रमुख एन्जेलो बोरेलीले सञ्चारमाध्यमलाई बताएअनुसार इटलीको लोम्बार्डी प्रान्त कोरोनाबाट निकै संकटतर्फ पुगेको छ । जहाँ दैनिक ४ हजारभन्दा बढि संक्रमित भेटिएका छन् ।
इटली केहि सातादेखि लकडाउनको अवस्थामा छ । जहाँ ६ करोड मानिस घरभित्रै कैद जस्तो जीवन गुजारीरहेका छन् ।
बुहानमा फेरि भेटिए कोरोना संक्रमित
चीनको सबैभन्दा बढि प्रभावित बुहान शहरमा छ दिनमा एक नयाँ संक्रमित देखिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । गएको पाँच दिनमा यहाँ कुनै पनि नयाँ संक्रमित भेटिएका थिएनन् । बुहानमा कोरोना संक्रमित बिरामीको भने मृत्यु भईरहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । सोमबार मात्रै बुहानमा ७ जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका थिए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुखद्धारा चिन्ता व्यक्त
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)का प्रमुखले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको प्रकोप तीव्र गतिमा फैलिरहेको चेतावनी दिएका छन्। टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले संसारभरि तीन लाखभन्दा धेरैमा सङ्क्रमण पाइएको भन्दै अझैपनि प्रकोपको गतिलाई परिवर्तन गर्न सकिने बताएका छन्।
बिबिसिसँग कुराकानी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘पहिलो केस भेटिएको ६७ दिनपछि एक लाखमा सङ्क्रमण पाइयो। दुई लाख पुग्न अर्को ११ दिन लाग्यो। तर त्यसको चार दिनमै तीन लाख पुग्यो।’
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणलाई विश्वव्यापी महामारीको सङ्ज्ञा यसअघि नै दिइसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पछिल्लो तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै कोरोनाको महामारी आक्रामक देखिएको भन्दै प्रक्षेपण बदल्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
कुन देशमा कति देखिए कोरोना संक्रमित
चैत ११ गते, २०७६ - १०:३१ मा प्रकाशित